विमानको शौचालयभित्र जव यो जोडीले देखाए यस्तो चर्तिकला ! – Etajakhabar
विमानको शौचालयभित्र जव यो जोडीले देखाए यस्तो चर्तिकला !
एजेन्सी। एक विमानको शौचालयभित्र एक जोडी साथमा भित्र थिए । विमानका केही यात्रु शौचालय जान प्रतिक्षारत थिए । यत्तिकैमा ढोका खुल्यो र उनीहरु एकसाथ बाहिर निस्किए । उनीहरु दुवैले एउटै किसिमको कपडा लगाएका थिए । सोही विमानमा यात्रा गरिरहेका अर्का यात्रुले खिचेर सार्वजनक गरेको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ ।
अमेरिकाका चर्चित भलिवल खेलाडी स्टेफर्ड स्लिकले यो घटनाको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । जुन भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । स्टेफर्डले घटना कहिलेको हो र कुन फ्लाइटको हो भन्नेबारे केही पनि खुलाएका छैनन् । इन्स्टाग्राममा उनले भिडियो सार्वजनिक गर्दै पहिलोपटक फ्लाइटमा जोडी नै एकैपटक बाथरूमबाट बाहिर आएको देखेको जनाएका छन् । बाथरुम भित्र उनीहरले अनैतिक काम गरेको भन्ने आशाका पनि गरिएको छ। ३४ वर्षिय भलिवल खेलाडीका अनुसार, केही महिलाहरु त्यतिबेला बाथरूम जानका लागि प्रतिक्षारत थिए । बाथरूमबाट त्यो जोडी बाहिर निस्कदा भने कसैले केही भनेनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस : विमान भित्रै एयर होष्टेसको यस्तो चर्तिकला
विमानका यात्रुहरुलाई सहयोग गर्न र समस्या पर्दा सघाउनु मुख्य जिम्मेवारी हो एयर होष्टेसको । तर पोर्चुगलको चर्चित विमान सेवा ह्विट एयरवेजमा भने एयर होष्टेसहरुले विमानभित्रै हंगामा गरेका छन् । खासमा विमान सेवाले विज्ञापनका लागि यस्तो फोटो शुट गराएको हो जुन आज सम्म दुनियाँका कुनै पनि विमान सेवाले गरेका छैनन् ।
ह्विट जेटको रंग र एयर होष्टेसले लगाएको विकनीको रंग समान छ ।
विमानभित्रै मोडल एयर होष्टेसहरु विकनीमा समेत देखिन्छन् । जुन फेसबुकबाट लिक भएका हुन् । कुनै तस्विरमा एयर होष्टेस मोडेलहरुले सामूहिक तस्विर खिचाइरहेका देखिन्छन् भने एउटामा त विमानमाथी नै चढेका छन् । यो विमान सेवाले चर्चाका लागि गरेको हर्कतकोरुपमा लिएका छन् विश्लेषकहरुले ।
Posted on: Tuesday, September 10, 2019 Time: 9:18:05
-20311 second ago
-19199 second ago